आफ्नो घरमा लक्ष्मीको वास होस् भन्ने चाहानुहुन्छ ? राख्नुस् यस्ता प्रतिमा !! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/आफ्नो घरमा लक्ष्मीको वास होस् भन्ने चाहानुहुन्छ ? राख्नुस् यस्ता प्रतिमा !!
जीवनमा हरेक मानिस चाहान्छन् सुख, शा न्ती र सम्बृ द्धी । हरेम मान्छे पैसाको लागि हरेक नै काम गर्छन । कारण बाच्नको लागि पैसा चाहिन्छ । हो, लक्ष्मीमात खुसी छन् भने पैसा कमाउंन सहज हुन्छ । यदि लक्ष्मीमाता हामीसंग रि साउ भएको छ भने प्रसा कमाउंन निक्कै गाह्रो हुन्छ ।आखर लक्ष्मीमातालाई खुसी कसरी राख्ने त् ?
घरमा सकराbत्मक र नक रात्मक ऊ र्जासँग जोडिएको चिजहरुलाई वास्तुशास्त्र भनिन्छ । जबकि वास्तुशास्त्रले हाम्रो जीवनको दिशालाई नयाँ दि शामा मोड्न सक्छ।– बासुरीलाई बास्तु दो ष निर्मुल गर्नमा निकै खास मानिन्छ। यदि आर्थिक सम स्याबाट मुक्ति पाउन छ भने घरमा चाँदिको बासुरी राख्न राम्रो हुन्छ। वास्तु शास्त्र अनुसार, सुनको बासुरी घरमा राख्दा घरमा लक्ष्मीको वास बनि रहन्छ । यदि सुन वा चाँदिको बासुरी सम्भव नभए वाँसको बासुरी पनि राख्दा राम्रो हुन्छ ।
– भगवान गणेश हर रुपमा मंगलकारी हुन्, तर धन(लक्ष्मीको दुख दुर गर्नको लागि नृत्य गरेको गणेश मुर्ति घरमा राख्नाले निकै शुभ मानिन्छ । भगवान गणेशको यस्तो मुर्ति घरको मुख्य द्वा रमा राख्दा राम्रो हुन्छ । यदि मुर्ति छैन भने तस्बिर पनि राख्न सकिन्छ ।
– देवी लक्ष्मीको तस्वीर वा मूर्ति त लगभग सबैको घरमा हुन्छ, तर धन-धान्य पाउनको लागि देवी लक्ष्मीको साथै भगवान कुबेरको मूर्ति वा तस्वीर राख्न जरुरी हुन्छ । स्थाई धन लाभको लागि घरमा देवी लक्ष्मी र भगवान कुबेर दुबैको पुजा गर्नु पर्छ । भगवान कुबेर उत्तर दिशामा राख्नु पर्छ ।
– वास्तुका अनुसार, शं खमा वास्तु दो ष हटाउने अद्भु त शक्ति हुन्छ, जुन घरमा शं ख राखिएको हुन्छ त्यहाँ जुन कुरा पनि राम्रो हुन्छ । शास्त्रका अनुसार, जुनको पूजा स्थलमा देवी लक्ष्मीको साथ शं खको स्थापना पनि गरिएको छ र पुज गरिन्छ भने त्यहाँ स्वयम लक्ष्मी माताको वास हुन्छ ।
– नरिवललाई श्रीफल भनिएको छ र यसलाई देवी लक्ष्मीको स्वरूप मानिन्छ । श्रीफलहरु मध्य एकाक्षी नरिवल निकै नै शुभ हुन्छ । जुन घरमा एकाक्षी नरिवल राखिएको हुन्छ र नियमित पुजा गरिन्छ, त्यहा सं कट कहिले पनि नआउने मान्यता छ, न त कहिले धन-धान्यको कमी हुन्छ ।
यो पनि :विशेषतः मंगलबारको दिनलाई गणेश भगवानको दिन भनिन्छ । मंगलबार गणेशको पुजा गरेमा कार्यसिद्दी हुन्छ भन्ने आम हिन्दुजनहरुको विश्वास रहेको छ । हिन्दु धर्म अनुसार गणेश भगवानको महिमा अपरम्पार रहेको छ ।
भगवान शिव र पार्वतीका पुत्र गणेशको पुजा आराधना विधिसम्मत गर्ने हो भने तँपाई हाम्राे जिवन पनि सुखी र खुुसी हुन्छ । हरेक भगवानको पुजा आजा गर्दा गणेश भगवानको पुजा शुरुमा गर्नुपर्दछ । भनिन्छ नि कुनै कार्यको शुरुवात गर्नुलाई नै श्रीगणेश गर्ने भन्नेबाट पनि यो कुरा पुष्टी हुन जान्छ ।
प्रायः जसो तिलको लड्डु चढाएर साथै फुल,जल र अक्षतासहित गणेश भगवानको पुजा गरिन्छ । गणेश भगवानलाई खुसी पारी आफ्नाे कार्य सिद्दी गर्नको निमित्त गणेश भगवानको पुजाको लागि पूर्ण तयारी गर्नुका साथै तोकिएको विधी अवलम्वन गर्नुपर्दछ ।
१ गणेश भगवानको फोटो वा मूर्ती तयार पार्नुहोस २ गणेश मन्दीर मै जानुहून्छ भने तिलको लड्डु तयार गर्नुहोस ३ स्नान गरी चोखो, सफा सुग्घर बन्नुहोस ४ पुजाको लागि आवश्यक सफा जल, जाै, तिल फुल र अक्षता एकै ठाउँमा संग्रह गर्नुहोस
पुजा गर्ने विधि १ सुरुमा मूर्ती अथवा फोटोको अगाडि पवित्र मनले दियो जलाई दिनुहोस २ दियो जलाई सकेपछी भगवानलाई मनपर्ने तिलको गुलियो लड्डु चढाई दिनुहोस ३ महिला भक्तजन भएमा आफ्नाे सारी अर्थात सलले पुजा समयमा आफ्नाे शिर छोप्नुहोला ४ अब अगरबत्ती जलाई त्यसलाई हातमा लिएर गणेश भगवानलाई विभिन्न सुगन्ध सहित पुजा आराधना गर्नुहोस
५ फूल अक्षता साथै पातिहरु अगरबत्ती बालेर आराधना गरीसकेपछी चढाईदिएर पुजा गर्नुहोस ६ गणेश मन्त्र उच्चारण माथि पहिलो चरणबाटै गर्नुपर्नेछ, अब मन्त्र उच्चारण गर्दै गणेश भक्ती गाईरहनुहोस ७ तपाँईको मनमा गणेश भगवान भएको कल्पना गर्नुहोस,आखाँ बन्द गरेर गणेश भगवान आफुसंगै भएको महसुस गर्नुहोस
८ गणेश भगवानसँग बोल्नुहोस, केहि इच्छीत कुरा भए माग्नुहोस,र तपाँई उहाँको भक्त भएको भान गराउनुहोस९ भगवानको शिरमा टिका लगाईदिई आफुपनि लगाउनुहोस र अरुलाईपनि लगाईदिनुहोस १० सम्पूर्ण भक्तजन साथै स्वयम् आफैले प्रसाद लिनुहोस, खुवाउनुहोस
यो पनि पढ्नुहोस् :किन राख्ने मङलबार को ब्रत: जसको मंगल ग्रह खराब चलिरहेको हुन्छ य जिवन मा कुनै कुरा पनि राम्रो भैरहेको हुदैन तेस्ता ब्यक्ति ले मगलबार को ब्रत राखेमा सुभ हुन्छ।यो ब्रत हनुमान जि लाई प्रसन्न गर्न का लागी गरिन्छ।अन्‍य देवी देवता जस्तै हनुमान जि को पुजा या ब्रत बस्न पनि बिसेस बिधि र तरिका हुन्छ जसको प्रयोग गर्दा उचित फल प्राप्त हुन्छ।
यसरी गरौ पुजा:मगलबार को पुजा गर्न बिहानै नुहाएर इसान कोण यानि उत्तर-पूर्व मा कुनै स्‍वच्‍छ स्थान मा हनुमान जि को मुर्ति स्थापना गरौ। मुर्ति को अगाडी घिउ को दियो जलाई चमेलि को तेल छर्केउ र रातो या पहेलो फुल को माला चडाउ।
तेस्पस्चात हनुमान चलिसा को पाठ गरेर सबै लाई प्रसाद बाडौ र भोजन दिन मा एक पटक मात्र गरौ।रात मा पुनह पुजा गरौ।हनुमान् जि लाई सिन्दुरि रङ को कपडा चडाउ र दान गरौ,यो ब्रत मा गहु र गुड बाट बनेको मात्र भोजन गरौ।एक पटक मात्र र नुन को प्रयोग नगरौ।रातो बस्त्र चडाउ र धारण गरौ।